प्रहरी हिरासतमा ज्यान गुमाएकाले न क्षतिपूर्ति पाए न न्याय ! – इन्सेक
प्रहरी हिरासतमा ज्यान गुमाएकाले न क्षतिपूर्ति पाए न न्याय !
खोटाङ ०७८ असोज १० गते
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आठ वर्ष अगाडि ज्यान गुमाएका १८ वर्षीय किरण राईको परिवारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति र न्याय पाएका छैनन् ।
दिक्तल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० का किरण राई हत्या आरोपमा ०७० जेठ २८ गते गिरफ्तारीमा परेका किरणको मृत्यु असार २६ गते भएको थियो ।
घटनामा तत्कालिन डिएसपी राजिव बस्नेत, इन्स्पेक्टर रमेश देवलगायत ११ जनाविरुद्ध कारवाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
उनीहरुलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महल अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ०७० भदौ १६ गते सिफारिस गरेको हो ।
पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ३ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ खोटाङका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोगको सिफरिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ०७२ वैशाख ७ गते गृह मन्त्रालयमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो ।
हिरासतमा राखेकै कारण मुत्यु भएको घटनामा उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजालस ओखलढुङ्गाले ०७४ भदौ १५ गते अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
आयोगको निर्णय र सिफारिसलाई सदर गरेको भए पनि न्याय नपाएको पीडितका आफन्त रजिव राईले बताउँदै पीडित अझ पीडित भएको र कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले यस विषय के भएको थियो र किन क्षतिपूर्ति नआएको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रहरीको कुटपिटबाट किरण राईको मृत्यु भएको परिवारजनको आरोप छ । प्रहरीले भने निमोनियाका कारण किरणको मृत्यु भएको भनेपछि थप परीक्षण गरिएको थियो ।
मानव अधिकार आयोगको पहलमा फरेन्सिक विशोषज्ञ डा. हरिहर वस्तीको टोलीले शव परीक्षण गरेको थियो ।